Dowladda Maraykanka oo Cuna-qabateyn Saartay Shirkaddo ay midi Soomaali tahay | SAHAN ONLINE
Dowladda Maraykanka oo Cuna-qabateyn Saartay Shirkaddo ay midi Soomaali tahay
WASHINGTON – Dowladda Mareykanka ayaa maalintii Jimcaha shaaca ka qaaday in ay cuna-qabateyn kusoo rogtay saddex qof iyo saddex shirkadood,kuwaasoo lagu eedeeyey in ay taageeraan kooxda isku magacowday Dowladda Islaamiga ah ee ISIS.
Shirkadahan iyo dadkan ayaa kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya,Filibbiin iyo Turkey-ga,waxaana lagu eedeeyey in ay xiriir ganacsi dhex maray kooxda ISIS iyo iyaga.
Waaxda Lacagaha Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay iney cuna-qabateyntan kusoo rogtay Abdulpatta Escalon Abubakar, oo lagu eedeyay inuu dhaqaale iyo agabba ugu deeqay kooxda ISIS ee dalka Filibbiin.
Sidoo kale cuna-qabateyntan ayaa lagu soo rogay Yunus Emre Sakarya iyo shirkaddiisa Profesyoneller Elektronik ee fadhigeedu yahay Turkiga, kaas oo lagu eedeyay in uu qeybo ka mid ah diyaradaha iswada uu u fududeeyay ISIS.
Maraykanka ayaa sidoo kale xannibaad dhaqaale ku soo rogey, Maxamed Mire Cali Yuusuf, iyo shirkadihiisa Liibaan Trading and Al Mutafaq Commercial Company, sababtoo ah bey yiraahdeen doorkiisa ku aaddan taageerada ISIS ee Soomaaliya.